Namaky ny firaketana COVID-19 isan'andro eran-tany i India tamin'ny tranga vaovao 314,835 tao anatin'ny 24 ora
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana India » Namaky ny firaketana COVID-19 isan'andro eran-tany i India tamin'ny tranga vaovao 314,835 tao anatin'ny 24 ora
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao Mafana India • Vaovao • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
India dia nitatitra 300,000+ aretina COVID-19 vaovao satria efa ho 16 tapitrisa ny totalin'ilay firenena
India dia nahita fiakaran'ny vidin'ny COVID-19
Ny isan'ny aretina COVID-19 any India dia mihoatra ny 15.9 tapitrisa
2,104 ny maty vaovao nambara tamin'io fe-potoana io ihany
Ny manampahefana indiana dia nitatitra tranga vaovao 314,835 COVID-19 androany, ka nahatratra 15.9 tapitrisa ny isan'ireo voan'ny aretina. 2,104 ny fahafatesan'olona vaovao nambara tamin'io vanim-potoana io ihany, ary nahatratra 184,657 XNUMX ny isan'ireo maty hatramin'ny nanombohan'ny valanaretina coronavirus tany India.
India dia tampon'isan'ny zava-bita eran-tany momba ny tranga vaovao COVID-19 isan'andro raha mahita ny fiakaran'ny valanaretina virus ny firenena.
Ny isa androany dia nitsoka ny avo indrindra iray andro teo aloha izay nahatratra 297,430 ny aretina, izay nitombo tany Etazonia tamin'ny volana Janoary.
Ny fiakaran'ny valanaretina coronavirus any India tato ho ato dia inoana fa entin'ny vazimba teratany vaovao an'ny pathogen, antsoina hoe B1617, izay misy mutation roa izay toa mampihanaka ny bibikely.
Ny tarehimarika COVID-19 novakian'i India dia tonga rehefa niasa ny firenena hamorona vaksinin'ny coronavirus any an-toerana, Covaxin, izay voalaza fa mahomby amin'ny 78% amin'ny aretina ny alarobia avy amin'ny orinasa Bharat Biotech monina any Hyderabad. Nahazo fankatoavana vonjy maika avy amin'ny manampahefana ara-pahasalamana tamin'ny fiandohan'ity taona ity, an-tapitrisany ny tifitra Covaxin efa nozaraina nanerana ny firenena, izay mikendry ny hamoaka fatra 100 tapitrisa isam-bolana amin'ny volana septambra.
Vaksiny miisa 13 tapitrisa mahery no vita tany India hatreto, anisan'izany ny doze of Covaxin ary koa jab novokarin'ny orinasa anglisy-soedoà AstraZeneca, novokarina teo an-toerana toy ny Covishield, ary vaksinin'ny Sputnik V vita Rosiana.